Ulo elu nke elu ugwu nke elu igwe, oghere nke ihe nkedo nke oma 60W Driver, Ul Dimmable Transformer Manufacturer
Nkọwa:Ebube Ejiri Elu nke Elu,Okpukpu uhie nke nchara 60W ọkwọ ụgbọala,Na-agbanwe agbanwe agbanwe agbanwe,,,
Home > Ngwaahịa > Onye na-akwọ ụgbọ na-anọ ọdụ > Ọkpụkpọ Ígwè Na-ahụ Maka Ọkpụkpụ
Ngwaahịa nke Ọkpụkpọ Ígwè Na-ahụ Maka Ọkpụkpụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ebube Ejiri Elu nke Elu , Okpukpu uhie nke nchara 60W ọkwọ ụgbọala suppliers / factory, wholesale high-quality products of Na-agbanwe agbanwe agbanwe agbanwe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Led ọkwọ ụgbọ ala CC na-atụgharị ike ọkọnọ Panel n’elu  Kpọtụrụ ugbu a
0-10V 100-277VAC Input Iron Case LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkwọ ụgbọala ọhụụ na DALI Dimmable  Kpọtụrụ ugbu a
45W 1100mA LED Panel Light Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-akwọ ụgbọala na-eji ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
UL Standard LED Panel Light Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Led ọkwọ ụgbọ ala CC na-atụgharị ike ọkọnọ Panel n’elu
Atụmatụ Nkwọ ụgbọ ala eletriki Kọmputa : Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Kwado 0-10V tinyere akara mgbawa, Passive ma ọ bụ ihe ngosi ọrụ. 100VAC ~ 277VAC Arụmọrụ dị elu ruo 88% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta...
0-10V 100-277VAC Input Iron Case LED Driver 0-10V Iron Case LED Driver HN45W-02, maka maka 2x4 Diana Na-enye ọkụ ọkụ, ngwa ọkụ ọkụ ime ụlọ, iji rụọ ọrụ n'ozuzu ọkụ ọkụ ime ụlọ. Ụdị dị ugbu a na-ekpuchi ọkwọ ụgbọ ala nke 0-10V / PWM / RX, na...
Ọkwọ ụgbọala ọhụụ na DALI Dimmable
Ọkwọ ụgbọala ọhụụ na DALI Dimmable Ngwaahịa ngwaahịa: Voltage mmepụta: 25-45V Max. Ihe mmepụta ihe: 55W Max. Mmepụta ugbu a: 1150mA Akụkụ: 180x76x33mm Arụmọrụ: 87% Ọkwọ ụgbọala Nyocha LED na DALI Encironment / IP...
45W 1100mA LED Panel Light Driver Ngwaahịa ngwaahịa: Voltage mmepụta: 25-40V Max. Mgbapụta mmepụta: 45W Max. Mmepụta ugbu a: 1100mA Akụkụ: 188x76x33mm Arụmọrụ: 87% Onye Igwe Igwe Electronic Encironment / IP Rating: Ime ụlọ /...
Onye na-akwọ ụgbọala na-eji ọkụ ọkụ
Ngwaahịa ngwaahịa: Voltage mmepụta: 25-40V Max. Mgbapụta mmepụta: 45W Max. Mmepụta ugbu a: 1100mA Akụkụ: 188x76x33mm Arụmọrụ: 87% Onye Igwe Igwe Electronic Encironment / IP
China Ọkpụkpọ Ígwè Na-ahụ Maka Ọkpụkpụ Ngwa
Ebe ahịa North Canada nke Canada dị na mbara igwe dị elu, a gaghị egosiputa wiring, ma ugbu a na-emepụta ihe mkpuchi igbe ọkpọ ígwè nke ọkụ ọkụ ọkụ, onye na-enye nsogbu, nwere ike iji ya rụọ ọrụ ọkụ eletrik, ọrụ 100 -347V . Uzo mmiri na-adịghị ala, ya mere maka ebe obibi akọrọ n'ime ime ụlọ.
Ebube Ejiri Elu nke Elu Okpukpu uhie nke nchara 60W ọkwọ ụgbọala Na-agbanwe agbanwe agbanwe agbanwe